एभिन्युज टेलिभिजनमेलम्ची झन अन्योलमा, सरकारले कसरी बढाउला आयोजनाको बाँकी काम ? (भिडियो रिपोर्ट) - एभिन्युज टेलिभिजन
मेलम्ची झन अन्योलमा, सरकारले कसरी बढाउला आयोजनाको बाँकी काम ? (भिडियो रिपोर्ट)
23 Magh 2075 Wednesday 12:05 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सम्झौता अनुरुप आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभई हात झिके पछि सरकारले स्पष्टिकरण पेश गर्न दिएको १४ दिने म्याद मंगलबार सकिएको छ । तर यो अवधीमा सीएमसीले सरकारलाई कुनै जवाफ दिएको छैन । अब कसरी बढाउला त सरकारले आयोजनाको बाँकी काम ?
सरकारले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई ठेक्का तोड्नका लागि दिएको १४ दिनको म्याद सकिएको छ । आयोजना सम्पन्न नगरी बीचैमा काम अलपत्र छाडेर भागेको सीएमसीले यो अवधीमा कुनै जवाफ सरकारलाई नदिनुमा अव सीएमसी काममा नफर्कने निश्चित भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेपछि केही समय अघि आयोजनाको प्रमुख दाता एशियाली विकास बैंक र सो आयोजनाबीच बाँकी रहेका काम फरक कम्पनीहरूबाट खण्ड–खण्डमा गराउने सहमति भएको थियो । तर पनि सरकारले एक पल्ट सीएमसीलाई काममा फर्काउन कोशिस गर्‍यो । तर सीएमसी नफर्कने निश्चित भए पनि खानेपानी मन्त्रालय र आयोजनाले काम अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको छ ।
आयोजनाको काम अघि बढाउन संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर जाँदा ढिलाई हुने भएकाले सो आयोजनाको बाँकि काम नेपाली निर्माण कम्पनीमार्फत् नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सीएमसीलाई दिइएको समय मंगलबार सकिएपछि अब मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम मात्रआयोजनाको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । २०७० सालमा इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसी ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । तर अहिले उक्त कम्पनी काम सम्पन्न नगरी अन्तिम समयमा भागेपछि आयोजना निर्माणको काम ठप्प छ ।